Ingakanani ukuhlolwa bekhulelwe noma ukwenza isivivinyo ngaphandle iphutha
Wonke umuntu wesifazane uye wake wazizwa injabulo ukubambezeleka esikhathini. Ngikhulelwe? Ngempela, lapho kusaqalwa njengoba zonke izimpawu kungukuthi eshiwo ngokucacile noma sahlukene nalo. Isicanucanu, ukushintshashintsha kwemizwelo, isifiso ukuhlanekezela - hhayi ukusebenza. Khona-ke yini izinga? Yiqiniso, ukuhlolwa sokukhulelwa! Ngezinye izikhathi wayephuma kuwukukopela, kodwa namanje, lapho ebona imivimbo ezimbili omazisayo uqinisekile ukuthi kuzokwenzekani, futhi ngizoqiniseka ukuthi ukhulelwe. Nokho, amantombazana, abangekho ukulungele uba umama, ngokuvamile ukhathazekile sokukhulelwa. Lokho banayo imibuzo eminingi futhi omunye wabo - indlela ukukhetha ukuhlolwa sokukhulelwa?
Futhi iyini ngaphambi ukuhlolwa sokukhulelwa?
ukuhlolwa abaningi angathola khona hormone kusaqalwa kakhulu. Kunezinhlobo eziningana ukuhlolwa, kodwa zonke esekelwe isimiso esifanayo. Ngamunye wabo iphendula hormone ekhiqizwa ngesikhathi sokukhulelwa - chorionic gonadotropin, njengoba besho ukuhlaziya yakhe - HG. Nguye omiyo egazini ngokushesha ngemva kokubamba, umchamo, uzovela ngosuku 3 zokuya esikhathini. Kulezi ukuhlolwa, kukhona reagent ekhethekile olushintsha umbala lapho zihlatshwa le hormone.
Ake sihlole ukuthi iyini le ukuhlolwa, kungakanani uhlolo sokukhulelwa, futhi uzisebenzise kanjani. Izinhlobo ukuhlolwa zincike ukuthi kubiza malini ukuhlolwa kokukhulelwa, ukuhlolwa ezibizayo kungacacisa ukuthi noma ngabe yini noma cha ukhulelwe cishe ngokushesha ngemva kokubamba.
Ukuhlolwa ngesimo emapheshana.
Lolu vivinyo aba phakathi kwabantu bokuqala, zingabantu ezishibhile futhi kulula ukuyisebenzisa. Udinga nje ukuqoqa ekuseni umchamo, bese uphonsa ukuba strip ukuze uphawu wayefisa amasekhondi angu-30, bese ulinda imizuzu 5 ubone umphumela. Uma imivimbo ezimbili elikhanyayo avele lokhu kuwumphumela omuhle.
It has amawindi ezimbili. Lowo nge pipette ukusebenzisa umchamo kwesinye uzobona umphumela. Lezi zokuvivinywa kunokwethenjelwa kunalena eyedlule, kodwa ayabiza.
Jet test ayidingi ukuqoqa umchamo esitsheni, wena nje umane athumele kuye umfudlana umchamo kanye nokuxhumana ne reagent uzobona umphumela. Isiqinisekiso le test-97%
Isimiso salo okufanayo. Kodwa, ngeshwa, ngenxa ukuthi kubiza malini ukuhlolwa sokukhulelwa elektroniki, kuba ezweni lethu akakabi okwandile. Kodwa inembe kakhulu futhi ikuvumela ukuba ichaze hormone ngesikhathi usaqala kakhulu.
- ngokunemba kuhle okusezingeni eliphezulu;
- ukuhlolwa asebenziseka kalula, badinga kuphela ufunde imiyalelo.
Kukhona futhi yokuntula:
Ububi main wukuthi ukuthi kubiza malini ukuhlolwa ekhulelwe linokwethenjelwa. Futhi ukuze uthole imiphumela olunembile kakhulu kuyodingeka sisetshenziswe.
Ukuhlolwa abakwazi njalo ukunikeza umphumela lesifanele.
Indlela yokusebenzisa ukuhlolwa kahle?
Lapho uthenga ukuhlolwa, qinisekisa ukubheka okungapheli, ngenxa ukubambezeleka test - umphumela ayivumelekile.
Musa ukuthenga ukuhlolwa ezishibhile - ngoba kuthinta ukuba yiqiniso kwale ndaba. imiphumela.
Ngemva kwemizuzu engu-5 zidlulile emva uke wasebenzisa ukuhlolwa, yi yayo iba evumelekile.
Ukuhlolwa kumele kwenziwe ekuseni, ngoba ngalesi sikhathi sosuku emakamu hormone eliphakeme. Kodwa kungenziwa emini, into esemqoka phambi 4:00 akahambi ethoyilethi.
Uhlolo musa ukunquma ukhulela ethunjini, ngakho ngaso sonke isikhathi kufanele ubonane nodokotela.
Qinisekisa ukuthi usebenzisa umchamo fresh for the test.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi ngezinye izikhathi ungavele ukulalela umzimba wakho, ngoba ugogo wethu akawasebenzisanga zonke izinhlobo zokuvivinywa futhi ultrasound. Ngokuvamile lapho abesifazane nje wokuthi ukhulelwe nosuku ngemva kokubamba. Kodwa zikhona izikhathi ukuthi akukho vivinyo lwabonisa ukuthi uNkulunkulu ukukhulelwa, lapho kakade wathuthuka.
Ngakho ukulalela umzimba wakho, kodwa ungakhohlwa mayelana nezindlela eqonde kakhulu ngalo ungakwazi ukwazi ukuthi ungumuntu umama, kuba ultrasound futhi ngihlolwa.
Inchazelo esiqondile sokukhulelwa: izindlela
Kanjani ukukhulelwa uma umyeni wakhe akafuni ukuba?
St John John Theological Monastery: Poshchupovo esifundazweni saseRyazan
"Impi izangoma" (isizini 16): Izibuyekezo ofakazi bokuzibonela
Rosehip "inja rose": incazelo, izici izinhlobo, ukunakekelwa kanye esiphelweni
Indlela ukususa ihamba kusukela ibhayisikili: A Kwesiqondiso Esiwusizo
Amagama Elihle abafana
Likuphi tantalum emhumeni? Kuyini ubude bayo?